အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အတ္ထုပ္ပတ္တိ, မောင်မောင်၊ လင်းယုန်, ရွှေဝယ်ဧ,
ⓘ အတ္ထုပ္ပတ္တိ - အတ္ထုပ္ပတ္တိ, မောင်မောင်၊ လင်းယုန်, ရွှေဝယ်ဧ, လွင်၊ သခင်, စိုးလှ၊ သိပ္ပံ, အုန်း၊ မြို့မ, မြတ်လေးနွယ်၊ ဒဂုန်, မြင့်၊ ဆရာ, ဒါရိုက်တာ, ဘဂဝါဂီတ ..
နိုင်ငံတကာ ကဗျာဆရာများ ကိုလိုနီ ထူထောင်သူများ ကိုလိုနီခေတ် အင်္ဂလိပ်အရာရှိများ ခရစ်ယာန် သာသာနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်များ ခရစ်ယာန် သူတော်စင်များ နိုင်ငံတကာ စစ်ခေါင်းဆောင်များ စိတ်ပညာရှင်များ စွန့်စားသူများ နိုင်ငံတကာ တော်လှန်ရေးသမားများ တော်ဝင် မိသားစုဝင်များ ဒဏ္ဍာရီလာ သူရဲကောင်းများ နိုင်ငံသားအလိုက် ကဏ္ဍများ နိုဘယ်ဆုရ ပုဂ္ဂိုလ်များ နိုင်ငံတကာ ပြဇာတ်ရေးဆရာများ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်သူများ ဗုဒ္ဓဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ နိုင်ငံတကာ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ နိုင်ငံတကာ ဘုရင်များ မင်းမျိုးမင်းနွယ်များ မြန်မာလူမျိုးများ အတ္ထုပ္ပတ္တိ နိုင်ငံတကာ မှတ်တမ်းရေးသားသူများ ယူနီကုဒ် ပညာရှင်များ ကမ္ဘာကျော် လုပ်ငန်းရှင်များ လူမှုရေး လုပ်ငန်းဖြင့် ထင်ရှားသူများ နိုင်ငံတကာ သမိုင်းပညာရှင်များ အကြမ်းဖက် သမားများ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ နိုင်ငံတကာ အားကစားသမားများ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဟူသည် ပါဠိစကားလုံးဖြစ်သည်။ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ `အကြောင်းအရာ၏ ဖြစ်ခြင်း´ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ယင်းပါဠိစကားကို ယူ၍ မြန်မာစာပေ၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဘဝဖြစ်ရပ်အား ရေးသားတင်ပြသည့် စာပေအမျိုးအစားကို အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဟူ၍၎င်း၊ အတ္ထုပ္ပတ် ဟူ၍၎င်း ယေဘူရအားဖြင့် ခေါ်ဆိုသည်။ ဒန္တဇအက္ခရာ ထဆင်ထူးမှ မုဒ္ဓဇ အက္ခရာ ဌဝမ်းဘဲပြောင်း၍ ဆိုခြင်းမှာလည်း ရှေးဟောင်း ပါဠိကျမ်းဂန်အရပင် ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဘဝနှင့် စရိုက်ကို ဖော်ပြသည့်စာသည် အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဖြစ်သည်။ အတ္ထုပ္ပတ္တိသည် ကဗျာ၊ ပြဇာတ်၊ ဝတ္တုစသည်တို့ကဲ့သို့ပင် စာပေ၏ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ စာပေ၏ အခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုကဲ့သို့ပင် အတ ...
ပရာယွတ်ချန်အိုချာ အာနန္ဒ မဟိတလ ယင်လပ် ရှင်နာဝပ် စုဠာလင်္ကရဏ သက်ဆင် ရှင်နာဝပ် ဘူမိဗလအတုလျတေဇ ပြဇာဓိပက ဝဇိရာလင်္ကရဏ
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History ဟု အမည်ရသည့် စာအုပ်အား သမိုင်းသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သူ Michael H. Hart မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့၍ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အသီးသီးပင် ၎င်းတို့၏ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာပြန်ဆို စာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းစာအုပ်အား ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်လည်းဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် New York: Carol Publishing Group မှထုတ်ဝေခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်မင်းနိုင် ဝါးခယ်မ မှ ၎င်းစာအုပ်အား ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အုပ်ရေတစ်ထောင်တိတိ ပထမဦးဆုံး ဘာသာပြန်ဆို ရေးသား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ ဤစာအုပ်ထဲတွင် ပါရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်မျ ...
နီပေါနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် နီပေါကွန်ဂရက်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဂီရိဂျာပရာဆတ်ကွိုင်ရာလာ ကို ၁၉၂၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် နီပေါနိုင်ငံ ဘီရက်နာဂါမြို့ရှိ ဂုန်လျှော်စက်ရုံ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ရာမှ အစပြုကာ နိုင်ငံရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် နီပေါအလုပ်သမားသမဂ္ဂကို တည်ထောင်သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် နီပေါကွန်ဂရက်ပါတီ၌ မောရန်းခရိုင်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် ဘုရင်မ ဟင်ဒရာလက်ထက်တွင် အကျဉ်းကျသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် အခြားသောအလုပ် သမားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တ ...
အနောက်နိုင်ငံပြဇာတ်အနုပညာ၌ အဆိုနှင့်အကကိုသာ ရောဖက်၍ပြသော ဇာတ်ရွှင်ဇာတ်မြူး ဟူ၍ ရှိသည်။ ယင်း ဇာတ်များကို ကောမစ်အော်ပရာဟုခေါ်သည်။ မြန်မာလို တေးသံစုံက ဇာတ်ရွှင်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုဇာတ်တို့တွင် သီချင်းစာသားရေးသားခြင်းနှင့် သီချင်းတေးသံသွင်းခြင်းသည် အရေးပါအရာရောက်ပေသည်။ ဆာဘွဲဲ့ရ ဆွင့်ဂီးလဗတ်သည် နာမည်ကျော် ပြဇာတ်ရေးဆရာဖြစ်၍ ဆာဘွဲ့ရ အာသာဆာ လီဗန်သည်လည်း နာမည်ကျော် ဂီတဆရာ ကြီးဖြစ်လေရာ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးတို့က ပြဇာတ်စာသားနှင့် ဂီတအသံကို စပ်တူ ရေးသားသီဆိုကြသည်မှာ အထူးပင် သဟဇာတဖြစ်ကြ၍ ဂီးလဗတ်နှင့် ဆာလီဗန်ဟူသော အမည် ၂ ခုမှာ ပြဇာတ် သမိုင်းတွင် ဒွန်တွဲလျက် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့လေသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦး၏ ဇ ...
ဂျွန် အိုကဲ သည် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်၊ အရှေ့တိုင်းနှင့် အာဖရိကလေ့လာရေးကျောင်း မှ တွဲဖက် သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတွင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဦးဆောင်ပညာရှင်ထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး ဂျွန် အိုကဲသည် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် တွင် ဂန္ထဝင်စာပေကို လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ မြန်မာစာပေသင်ယူရန် မသွားမီ SOAS တွင် အာရ်. ကေ. စပရစ်ဂ် နှင့် အခြား ဘာသာဗေဒပညာရှင်များထံတွင် ဆက်လက်လေ့လာဆည်းပူးသည်။ ဆရာကြီးရွှေပြည်ဦးဘတင် စသူတို့ထံတွင် မြန်မာစာပေကို ဆည်းပူးခဲ့ဖူးသူဟု ဆိုကြသည်။ မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်း နှစ်တွဲကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အက်ပဲလ် ကွန်ပျူတာများတွင် အသုံးပြုရန် Ava Las ...
အမည်=ရှရီပရာနတ်မူခါဂျီး ရွေးချယ်ခံနယ်‌မြေ=ဂျန်ဂီပူးရ် ပါတီအမည်=အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက် အဖအမည်=ရှရီ ကမ္မဒါကင်ကာမူခါဂျီး အမိအမည်=ရာ့ဂျ်လက်ရှမီးမူခါဂျီး မွေးသက္ကရာဇ်=၁၉၃၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် မွေးဖွားရာဒေသ=အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်၊ Birbhum ခရိုင်၊ မီရာတီကျေးရွာ ဇနီးအမည်=ဆူဝရမူခါဂျီး လက်ထပ်ရက်စွဲ=၁၉၅၇ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက် သားသမီး=သား ၂ ယောက်၊ သမီး ၁ ယောက် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ=ဟိန္ဒူ ပညာအရည်အချင်း=မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ဥပဒေဘွဲ့၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာ=pkm sansad.nic.in ဝါသနာနှင့် အပန်း‌ဖြေမှု=စာဖတ်ခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် သီချင်းနားထောင်ခြင်း သီချင်း ထင်ပေါ်ကျော်က ...
ဘဂဝဒ်ဂီသာသည် မဟာဘာရတလင်္ကာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဂဝါဂီတတွင် စကားပြောသူ လေးဦးရှိ၏။ ယင်းတို့ကား ဘုရင် ဓီတရဋ္ဌ၊ သူ၏အမတ်ကြီး သဉ္စယ၊ ပဏ္ဍဝမင်းသား အဇ္ဇုနနှင့် သူ၏ရထားထိန်း၊ ကရစ်သျှဏတို့ ဖြစ်ကြ၏။ ဓီတရဋ္ဌသည် မျက်စိမမြင်ပေ။ သူ့အား ကုရုခေတ္တတွင် ပဏ္ဍဝနှင့် ကောရဝတို့ တိုက်ကြပုံကို အဝေးမှ မြင်နိုင်ကြားနိုင်သော တန်ခိုးရရှိအောင် ဝါလ်မီကိရသေ့ကြီး ဖန်ဆင်းပေးမည်ဟု ဆိုသော်လည်း သူက သူ၏သားရင်းတို့ သေကြေကြသည်ကို မမြင်ဝံ့သဖြင့် ငြင်းဆိုလိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဝါလ်မီကိရသေ့ကြီးသည် ဓီတရဋ္ဌ၏အမတ်ကြီး သဉ္စယအား အဆိုပါတန်ခိုးရရှိအောင် ဖန်ဆင်းပေးလိုက်၏။ စင်စစ်သော်ကား ဘဂဝါဂီတသည် အခြားမဟုတ် ကုရုခေတ္တစစ်မြေပြင်ဝယ် အ ...
မာရီယာ မွန်တက်ဆိုရီ သည် ၁၈၇၀ ပြည့်နှစ် တွင်မွေးဖွားပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ အီတလီမှကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သောကလေးများကို သင်ကြားရာတွင် ယနေ့တိုင်လူသိများခဲ့သည့် မွန်တက်ဆိုရီနည်းကို တီထွင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းကို ရောမမြို့တော်တွင် ၁၉၀၇ ခုနှစ်၌ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ရသည်။ မာရီယာ မွန်တက်ဆိုးရီးသည် အီတာလျံ အမျိုးသမီး ပညာရေး သုတေသီဖြစ်၍ မွန်တက်ဆိုးရီး ပညာသင်ကြားနည်းကို တီထွင်သူဖြစ်သည်။ ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ရောမ တက္ကသိုလ်မှ ဆေးပညာဘွဲ့ကို အီတာလျံ အမျိုးသမီးထဲတွင် ပထမဦးဆုံး ရရှိသူဖြစ်ပေသည်။ ဒေါက်တာ မွန်တက်ဆိုးရီးသည် စိတ် ပျော့ညံ့သ ...
မွေးဖွား ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်၊ စနေနေ့ အလုပ်အကိုင် စာရေးဆရာ နိုင်ငံသား တောင်ကိုရီးယား ကာလ ၁၉၆၃ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ ရှင် ကျွန်းဆွတ် 신경숙 သည် တောင်ကိုရီးယား စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူ့အမည်တွင်" ရှင်” မှာ မိသားစု မျိုးရိုးနာမည် ဖြစ်သည်။
သစ်ပင်လူသားသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့ ၁၈၀ ကီလိုမီတာအကွာ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ တတ်ဂျန်ဂျာရာ ဒေသတွင်နေထိုင်သူ မစ္စတာ ဒီဒီ ကိုဆာဝါ နှစ် ဖြစ်သည်။ ခန္တာကိုယ်ပေါ်ရှိ အရေပြားများသည် သစ်ခေါက်၊ သစ်မြစ်များကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီး၊ အမှန်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းရောဂါဖြစ်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဆရာဝန်က တစ်ရူးစယူပြီး ဓာတ်ခွဲကာ ဆေးကုသပေးရန် ကမ်းလှမ်းချက်ကို အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ၏ ငြင်းဆန်ခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတအမိန့်နှင့် ပြည်တွင်းဆရာဝန်များက ဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်လိုက်သော်လည်း မအောင်မြင်ပေ။ နောက်ဆုံးတွင် ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အကူအညီဖြင့် ဆေးကုသရာ သက်သာသွားသည်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်လက်ကြီးထွားနေ ...
ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ် သည် စာရေးဆရာလှသမိန် ရေးသားထားပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် ဟံသာဝတီ စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ် ဖြစ်သည်။ သမိုင်းတွင် ထင်ရှား အရေးပါ အရာရောက်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း ၂၀၀ ခန့်၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို စုဆောင်း တင်ပြထားသည်။ အကိုးအကား ကျမ်းပေါင်း ၉၈ အုပ်ထိ ရှိပြီးလျှင် အခြားသော စာ၊ နယ်၊ ဇင်း အပြင် မှတ်စုမှတ်ရာများ၊ ဖြတ်ပိုင်းများကိုလည်း ကိုးကားထားကြောင်း ဆိုသည်။ ရှင်များသာမက လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမျိုးသမီးများ အကြောင်းပင် ပါသည်။
ဝါလ်မီကိရသေ့ကြီးသည် ရှေးခေတ် အိန္ဒိယစာပေ တွင် ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ ကျမ်းဂန်များကို ရေးသားခဲ့သော ပညာရှိကြီးဖြစ်သည်။ သူရေးခဲ့သော လင်္ကာရှည်ကြီးများမှာ မဟာဘာရတနှင့် ရာမာယဏ မည်သော လင်္ကာရှည်ကြီးနှစ်စောင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။